Man United ayaa ugu dambeyntii ku biirtay ugaadhsiga Eriksen - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »Wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga: Man Utd ayaa ugu dambeyntii ku biirtay ugaadhsiga Eriksen
Wada hadal toos ah: Man Utd waa ugu danbeyntii ku biirtay ugudbinta Eriksen
Daaqada suuqa kala iibsiga ee kooxaha ugu waaweyn Yurub ayaa xiran, laakiin waad gujin kartaa si aad u aragto dhammaan dalabyada . Wareejinta Wadahadalka waxay sii wadi doontaa in ay la socoto warbaahinta adduunka iyo saxafiyiinta qulqulaya si ay u arkaan waxa ku jira ajandaha xagaaga.
Man United waxay heshay mushaharka sedax jeer Eriksen
Kubadsameeyaha Tottenham Hotspur Christian Eriksen ayaa noqotay mid ka mid ah labadii sano ee la soo dhaafay. Sida lagu daabacay wargeyska The Mirror
Kabtanka Danish Eriksen ayaa bilood oo kaliya 14 on heshiiska uu kula Spurs, taasoo la micno ah in lacag suuqa kala iibsiga uu ku dhici karo haddii uu soo galay finalka. sano ee ganacsigiisa. Tani waxa ay keentay qaar ka mid ah kooxaha ugu qiimaha badan ee Europe, laakiin Maraykanka u muuqataa diyaar u ah inay qaataan tallaabo ku saabsan kooxda ay xafiiltamaan iyadoo la siinayo ay saddex laabmaan, mushahaarada nin dhallinyaro 27 sano 240 000 £ toddobaadkii, dhanka ah 80 000 £ toddobaadkii. Waqooyiga London.
Eriksen wuxuu ku soo barbaaray Real Madrid, waxaana loo sheegay inuu doonayo inuu u wareego Santiago Bernabeu ka dib markii uu maamulayay tababaraha Zinedine Zidane, laakiin Whit mudnaanta waqtiga. Weeraryahanka Chelsea Eden Hazard Heshiiska Old Trafford waa mid aad u badan.
Inkastoo uu Eriksen xaaladiisa qandaraaskiisu sii socdo, haddana qaar ka mid ah wargeysyada ayaa sheegaya in 95 ay weli tahay inay bixiso Spurs si ay u iibiso sheyga. kubad sameeye
Chelsea ayaa ka hadlaysa mustaqbalka Ibrahimovic ka dib markii uu ku biiray Holland
Chelsea ayaa si dhow ula socota weeraryahanka Borussia Dortmund Alexander Isak Swede da'yar oo horey u barbardhigi lahaa ninka ay isku wadanka yihiin Zlatan Ibrahimovic .
The 19 sano jir ah ayaa arkay fursadaha kooxda koowaad ku koobnayn ee Dortmund tan iyo markii ay saxiixa AIK Stockholm-ku-saleysan 2017 uu, laakiin waxa uu ku riyaaqay muddo cajiib ah oo amaah ah kooxda reer Holland ee Eredivisie Willem II, kaasoo dhaliyay kow iyo toban yoolalka ciyaaraha inta badan laga soo bilaabo bisha Janaayo
Madaxda Chelsea ayaa ka warqabay arintaan sheegashada Mirror Blues ayaa u dirtay dadka u soo daawashada dhalinyarada. ka dib markii ay ku soo idlaatay Ajax todobaadkan.
Dadka deggan Galbeedka London waxay doonayaan inay cusboonaysiiyaan waaxda isdaba-joogga ah iyagoo qoraya dhalinyaro ka hor gaajo, oo leh deymaha sannadka 31 Gonzalo Higuain iyo sanadaha 32 Olivier Giroud oo ah ciyaaryahanka kaliya ee horyaalka ugu jira Stamford Bridge
Chelsea waa inay la tartantaa Isak, lakiin Real Madrid ayaa sidoo kale kormeereysa horumarkeeda.
Barca Real ayaa udiyaarineysa wiil dhalinyaro ah oo reer Japan ah
19659003] Real Madrid iyo Barcelona ayaa sii wadaya p A da 'aad loo qiimeeyo dhalinyarada Japan Takefusa Kubo sida lagu daabacay wargeyska Marca .
Ninkii dhallinyarada ahaa ee 17 sano oo qayb ka ah akadeemiga La Masia Barca ee 2011 in 2015 ahaa, laakiin ku soo laabtay ka dib markii Japan ay ogaadeen in kooxda Catalans ay ku xadgudbeen siyaasadda caalamiga ah ee FIFA oo la xidhiidha wareejinta caalamiga ah ee ka yar 18 sano ee 1965. iyadoo kooxda reer Spain ay diyaar u yihiin inay u tartamaan saxiixa sano Japan International Under-20 xagaagan, markii uu 18 sano.
Wargeyska Isbaanishka ayaa sidoo kale sheeganaya in Paris Saint-Germain ay soo bandhigtay xiisaha ciyaaryahanka, laakiin PSG iyo Madrid ayaa aaminsan in Kubo ay uqalantay inay kulan la qaataan Nou Camp.
Ku dheji Ins
Arsenal ayaa laga yaabaa inay si lama filaan ah dib ugu soo laabato bartamihii xilli ciyaareedkaan ee 30  Toby Alderweireld oo ku aadan suurtogalnimada caalamiga ah ee Belgian Sida lagu daabacay wargeyska The Sun  -
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/blog/transfer-talk/79/post/3825157/transfer-talk-manchester-united-the-latest-club-to-join-eriksen-hunt
CHAN 2020: tartanka ka baxsan Itoobiya oo dib loogu soo celiyay Cameroon